घोराही सिमेन्ट उद्योग देशमै उत्कृष्ठ – Rajmarg Online
घोराही सिमेन्ट उद्योग देशमै उत्कृष्ठ
दाङ, मङ्सिर । नेपाल भर रहेका विभिन्न उद्योग मध्ये सबैभन्दा धेरै कर बुझाए बापत दाङमा रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित भएको छ । सातौं कर सप्ताहका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा उद्योगलाई सम्मान गरिएको थियो ।
सरकारले सात बर्ष अघि देखि राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ । सोही क्रममा अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा देश भरका उद्योगी करदाता मध्य घोराही सिमेन्ट उद्योग समयमै र सबै भन्दा धेरै कर तीर्ने उद्योगका रुपमा सम्मानित भएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौले सातौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ गोग्लीमा रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योग प्रालिलाई सम्मान गरेको हो ।
स्थापनाकाल देखी हालसम्म समयमै मूल्य अभिबृद्धी कर विवरण र कर बुझाएका करतादा मध्य वितेको आर्थिक बर्ष २०७३÷२०७४ मा सबै भन्दा बढी मूल्य अभिबृद्धी कर दाखिला गरेको भन्दै विभागले सम्मान गरेको हो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले हरेक बर्ष मंसिर १ गतेका दिन कर दिवस साताव्यापी रुपमा मनाउँदै आएको छ । सोही क्रममा देशभरका उद्योगी, व्यवसायी र व्यक्तिगत रुपमा उत्कृष्ठ करदातालाई सम्मान गर्दै आएको छ ।
दाङ जिल्लामा रहेको उद्योगले देशभरका उद्योगमध्य सवैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेकोमा दाङबासीले खुशी व्यक्त गरेका छन् । उद्योगले सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ । वडा नं. ४ र साविकको लक्ष्मीपुर गाविस लगायत बंगलाचुली गाउँपालिका लगायत अनेत्र पनि सामाजिक विकासका काममा सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
उद्योगका जनसम्पर्क अधिकारी अमर सुवेदीका अनुसार हरेक बर्ष सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत बर्ष मात्रै पनि उद्योगले करिब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको रकम योगदान गरेको थियो । उद्योगले सडक निर्माण, धुलो नियन्त्रण, बृक्षरोपण, बातावरण सरसफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।